Misy Zavatra Tsara Kokoa Noho ny Krismasy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Oromo Ossète Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Silianina Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
KRISTIANINA an-tapitrisany no tsy mankalaza Krismasy. Mahatsiaro ho matiantoka ve anefa izy ireo? Mahatsiaro ho voa mafy ve ny zanak’izy ireo? Andeha isika handinika izay lazain’ny Vavolombelon’i Jehovah avy any an-tany samy hafa.
Mahatsiaro an’i Jesosy Kristy: “Rehefa Krismasy na Paka ihany aho vao nandeha niangona, tamin’ny mbola tsy Vavolombelon’i Jehovah. Na niangona aza anefa aho, dia tsy nahatsiaro an’i Jesosy Kristy akory. Tsy manao Krismasy intsony aho izao, fa mivory any amin’ny Vavolombelon’i Jehovah indroa isan-kerinandro. Mampianatra momba an’i Jesosy mihitsy aza aho.”—EVE, AOSTRALIA.
Manolotra fanomezana: “Faly be aho rehefa omen’olona fanomezana amin’ilay fotoana tsy ampoiziko iny. Tia zavatra tampotampoka mantsy aho! Tiako koa ny manao karta sy sary hoso-doko ho an’olona. Faly erỳ ry zareo amin’izay, moa izaho koa mba faly.”—REUBEN, IRLANDY AVARATRA.
Manampy ny sahirana: “Tianay ny mahandro sakafo ho an’ny marary. Hitondranay voninkazo na mofomamy na fanomezana kely koa izy ireo indraindray, amin’izay mba falifaly. Aleonay izany satria afaka mitsidika azy ireo foana izahay na rahoviana na rahoviana.”—EMILY, AOSTRALIA.
Miaraka amin’ny fianakaviana: “Milamina tsara ny fotoana hihaonanay amin’ny havanay. Lasa fantatry ny zanakay tsara ny dadatoany sy ny nenitoany sy ny zanak’izy ireo ary ny dadabeny sy bebeny. Tsy mahatsiaro ho voateritery izahay satria tsy misy daty voafaritra tsy maintsy hiarahanay. Fantatry ny havanay koa fa tianay izy ireo matoa izahay mitsidika azy.”—WENDY, NOSY CAÏMANS.
Miadana: “Toa be loatra ny zavatra atao rehefa Krismasy ka zara raha misy mieritreritra ny hisian’ny fiadanana. Mahatsiaro ho maivamaivana anefa aho izao satria mahalala izay ampanantenain’ny Baiboly. Fantatro izao fa ho sambatra ny zanako amin’ny hoavy.”—SANDRA, ESPAINA.
Hizara Hizara Misy Zavatra Tsara Kokoa Noho ny Krismasy
Inona no Tsapanao Rehefa Krismasy?—Misy Zavatra Tsara Kokoa Noho ny Krismasy
w12 1/12 p. 9